ब्लगिङ भनेको पनि एक किसिमको समाज नै हो :आस्था घिमिरे - MeroReport
ब्लगिङ भनेको पनि एक किसिमको समाज नै हो :आस्था घिमिरे
स्नातक तह अध्ययनको तयारीमा रहेकी आस्था घिमिरे नयाँ कुरा सिक्न र किताब पढ्न मनपराउँछिन । कार्टुन धेरै हेर्ने आस्था चुलबुले स्वभावकी छन् । संगीत, फोटोग्राफी,चित्रकलामा पनि रुचि राख्ने उनलाई डु ईट युअरसेल्फ (DIY-DO IT YOURSELF) प्रोजेक्ट गर्न मन छ । आमासँग बगैंचाको काम सिकिरहेकी आस्थालाई लामो यात्रा गर्ने उत्तिकै शौख छ । यसका अलावा ब्लग लेखनमा सक्रिय आस्था घिमिरेलाई आज हामीले मेरो रिर्पोटको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
मलाई साथीभाइहरु "पढन्ते छौ" भन्छन, मलाई त मनपर्छ :) अनि क्टालिया (Cataleya) चाहिँ मेरो उप नाम हो ।
ठ्याक्कै कहिले भन्ने याद छैन। स्कूल पढ्दा देखिन नै लेख्नमा रुचि थियो, पछि कलेजमा हुँदा एकजनाले फेसबुकमा आफ्नो ब्लगको लिंक राखेको देखेँ । अनि मलाई पनि कोशिश गर्न मन लाग्यो। पढाईको व्यस्तताले गर्दा लामो समयसम्म लेख्न बन्द पनि गरेँ र गत सालदेखि फेरि सुरु गरेँ।
मेरा लागि ब्लग आफ्नो आवाज र विचार उठाउने अनि आफुलाई पोख्ने माध्यम बनेको छ। आफ्नो ब्लगमा म सकेसम्म विविधता ल्याउन चाहन्छु। कुनै एक विधामा सिमित छैन, मसँग सम्बन्धित सबै कुराकf बारे लेख्छु।खासगरी मेरा कृतिहरु, मैले भोगेका जानेका र मलाई मनपरेका कुराहरु छन्।
तपाईले http://her-infinities.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि चलाउनु हुन्छ ? अनि ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ त ?
अहिलेसम्म त यही एउटा मात्र चलाएकी छु। ब्लगिङ गर्न त्यति गाह्रो त हैन तर मुख्य चुनौती भनेको ब्लगलाई निरन्तरता दिनु हो।
आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न अहिले युवाहरुले ब्लगिङ्गप्रति आर्कषित भई रहेका छन, नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोग ?
केहि बाहेक सबैले सदुपयोग गरेको देख्छु। अहिलेको बढ्दो विद्युतिय सञ्चार संस्कृति (electronics communication culture) मा ब्लगिङ सबैका लागि आफ्ना विचार उतार्ने सहज र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। खासगरी किशोरकिशोरी र युवावर्गमा ब्लगिङ बढी चर्चित देखिन्छ। नेपालमा धेरै राम्रा लेखनशैली भएका प्रतिभाशाली ब्लर्गसहरु छन्। समयसँगै ब्लगिङ झन फस्टाउँदै गर्इरहेको छ।
एकदमै आवश्यक छ । ब्लगिङ भनेको पनि एक किसिमको समाज नै हो। कुनै पनि समाजमा नियम र कर्तब्य भएन भने स्थायित्व रहदैंन।
अहिलेका लेखकहरु प्रायः जसो शिक्षित र आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल व्यक्तिहरु छन् । त्यसैले पनि होला आचारसंहिता पालना गरेकै पाएकी छु। खासगरी मुलधारका संचार माध्यमले आ(आफ्ना ट्वीटर र फेसबुक पेजमा पाठकसँग अन्तरक्रिया गर्नाले दुबै पक्षलाई सहजता र सन्तुष्टी भएको छ। छापा भन्दा अनलाइन पत्रिकाहरुमा जहाँ कहिँबाट पहुँच पाउँन निकै सजिलो पनि हुन्छ। कुनै कुनै ब्लगहरुमा आफ्ना कुरा राख्ने भन्दा पनि अरुलाई पछाडी तान्न खोज्ने प्रवृति पनि बढेको पाउँछु। ब्लगिङ गर्दा यो सबैको ध्यान पुर्याए कै राम्रो।
खासै उल्लेख्य केही छैन तर ब्लगिङका मार्फत धेरै रमार्इला व्यक्तिहरुसँग चिनजान भएको छ।
ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिताको एक रुप नै हो । ब्लगका माध्यमबाट धेरैले आवाज उठाएको देखिन्छ। ब्लगिङ सामाजिक अन्तरक्रियाको लागि एकदमै उपयोगी थलो हो ।